Degso PES 2021 LITE loogu talagalay Windows
Degso PES 2021 LITE
Degso PES 2021 LITE,
PES 2021 Lite waa lagu ciyaari karaa kombuyuutarka! Haddii aad raadineyso ciyaar kubbadda cagta oo bilaash ah, eFootball PES 2021 Lite ayaa talo noo ah. PES 2021 Lite PC ayaa laga soo saaray kuwa rajeynaya ciyaar kubbadda cagta PES oo bilaash ah! Ciyaarta kubada cagta ee eFootball PES 2021 Lite, oo lagu keydiyo sida FIFA ee kombiyuutarka, qalabka kombiyuutarka iyo mobilada, ayaa hadda loo heli karaa in laga soo dejiyo Steam. Si aad ugu ciyaarto PES 2021 bilaash, kaliya dhagsii badhanka PES 2021 Lite Download ee kore.
Soo Degso PES 2021 Lite
PES 2021 LITE waxay siisaa marin aan xadidnayn dhammaan astaamaha qaabka myClub. Gudaha MyClub, waxaad ku dhisi doontaa kooxdaada riyadaada adoo qoranaya ciyaartoy iyo maareeyayaal u dhigma qaabkaaga shaqsiyeed. Shaahaaga u rogo xiddigo ama saxiix halyeeyo iyo ciyaartoy kale oo awood leh si aad uga faaiideysato tartanka.MicClub wuxuu kaloo bixiyaa marinka taxanaha Iconic Moment Series, oo ah nooca ciyaartoy cusub ee xoogan ee lagu daray PES sanadkan.
Ciyaartoydan waxay ka soo qaataan daqiiqado xusuus leh shaqooyinka xiddigihii hore iyo kuwii hore, waxayna sidoo kale kuu oggolaanayaan inaad la saxiixato kala duwanaansho xoog badan oo Ciyaartoyda Featured ah. Ku dar labadan nooc ee ciyaartoy adag kooxdaada oo ka tali tartanka!PES 2021 LITE sidoo kale waxay la socotaa qaabka Matchday, qaabka tartanka PvP ee aad uga qayb gasho dhacdooyinka kala duwan ee ay dhiirrigeliso cayaaraha kubbadda cagta adduunka dhabta ah iyo xafiiltanka caanka ah. Habka ciyaar-ciyaareedka sidoo kale waa tartan isboorti, hoy u ah eFootball, oo martigaliya ciyaartoy heer kasta oo xirfadeed ah.
Intaas waxaa sii dheer, PES 2021 LITE waxaa ka mid ah qaababka Local Match iyo Tababar oo kuu oggolaanaya inaad xirfadahaaga ku xoojiso kombiyuutarka. Habka loo yaqaan Edit Mode sidoo kale waa lagu soo daray, taasoo ku siinaysa awood aad ku habeyn karto oo aad u abuuri karto xariijimo, astaamo iyo magacyo kooxeed. Habka wax lagu beddelo ayaa sidoo kale kuu oggolaanaya inaad soo dejiso xogta ay abuureen isticmaaleyaasha kale isla markaana aad u hesho naqshado kala duwan oo aan xadidnayn.
Habee kooxdaada oo garoonka ugu soo gal qaab muuqaal ah! PES 2021 LITE,Waxay si buuxda u taageertaa Barnaamijka Dhibcaha eFootball ee dhawaan la bilaabay. Dhibcaha eFootball waa lacagta barnaamijka Dhibcaha eFootball. Dhibcaha waxaa lagu kasban karaa siyaabo kala duwan, oo ay ku jiraan ciyaar ciyaar iyo daawashada tartamada eFootball.
Kadib markaad kasbato dhibco, waxaad u isticmaali kartaa waxyaabo kala duwan oo ciyaarta ah iyo gunno. Waxaad sidoo kale kasban kartaa dhibcaha eFootball adigoo kaqeyb galaya xilli ciyaareedka 2020-21 ee EFootball. Waxaa loo qorsheeyay inay bilaabato bisha Diseembar.
Qaar ka mid ah gunnooyinka aad ku kasban karto dhibcaha eFootball ayaa loo isticmaali karaa in lagu xoojiyo kooxdaada, markaa hubi inaad ku biirto eFootball. Wuu furan yahay si aad u kasbato dhibco badan intii suurtagal ah! PES 2021 LITE sidoo kale waxay leedahay waxyaabo badan oo ruqsad haysta oo ka socda shirkadaha rasmiga ah ee Konami ee FC Barcelona, ​​FC Bayern München, Juventus, Manchester United iyo Arsenal. Tani,Mid kasta oo ka mid ah naadiyadayada lamaanaha nala ah, ee dib loogu abuuro ciyaarta si taxaddar leh faahfaahinta, sidoo kale waxaa ku jira garoomadooda.
PES 2021 Noocyada Habboon ee La Ciyaari Karo
Tartanka Maxaliga ah
Tartanka khadka tooska ah (oo ku xaddidan tartamada gaarka ah)
Wax ka beddel qaabka (Steam iyo PS4 kaliya)
PES 2021 Kooxaha Ciyaara LITE
Kooxaha ka ciyaari kara FC Barcelona, ​​FC Bayern München, Juventus, Manchester United, Arsenal, Local Match iyo Together modes. Dhammaan qaababka kale waxay kuu oggolaanayaan inaad xulato isla naadiyada nooca ciyaarta oo dhan.Macluumaadka MyClub waxaa loo wareejin karaa inta u dhexeysa PES 2021 iyo nooca buuxa ee PES 2021 LITE. Ciyaartoyda labada nooc ee bilaashka ah iyo nooca buuxa ee PES 2021 dhammaantood way wada ciyaaraan isla server-ka, taas oo macnaheedu yahay maya Fadlan ogow in qaababka qaar, oo ay ku jiraan Master League, lagu heli karo oo keliya nooca ciyaarta oo dhan.Naadiyada qaar laguma ciyaari karo qaababka qaarkood ee PES 2021 LITE. Saamaynta joogtada ah ee ka timaadda OPID-19 Waddamada qaar ayaa laga yaabaa inay codsadaan isbeddelada daqiiqadaha ugu dambeeya qaar ka mid ah qaban qaabada tartanka. Natiijo ahaan,Dhammaan faahfaahinta tartanka waa la beddeli karaa ogeysiis laaan.
PES 2021 LITE Noocyada
Wararkii Ugu Dambeeyay: 11-04-2021
PES 2021 Lite waa lagu ciyaari karaa kombuyuutarka! Haddii aad raadineyso ciyaar kubbadda cagta oo...
Maareeyaha Kubadda Cagta 2021 waa xilli -ciyaareedka cusub ee Maareeyaha Kubadda Cagta, ciyaarta...
Adigoo soo dejinaya PES 2021 (eFootball PES 2021) waxaad helaysaa nooca PES 2020 ee la...
FIFA 22 waa ciyaarta ugu fiican kubada cagta ee lagu ciyaari karo kombiyuutarka iyo...
PES 2020 (eFootball PES 2020) waa mid ka mid ah cayaaraha kubbadda cagta ee ugu wanaagsan ee aad ka...
Pro Evolution Soccer 2013, PES 2013 marka la soo gaabiyo, wuxuu ka mid yahay ciyaaraha adag ee...
FIFA Online 4 waa nooca gaarka ah ee aad ugu ciyaari karto ciyaarta kubbada cagta ugu fiican FIFA...
Soo dejiso PES 2019! Pro Evolution Soccer 2019, oo loo yaqaan PES 2019, wuxuu u taagan yahay ciyaar...
NDANI YETU NI SOKA, kama meneja na mkufunzi, utapata shida na mhemko wa kilabu unachopenda na...
Adigoo soo degsanaya PES 2019 Lite, waxaad ku ciyaari kartaa Pro Evolution Soccer 2019, mid ka mid...
Maareeyaha Kubadda Cagta 2022 waa ciyaar maareynta kubbadda cagta Turkiga oo lagu ciyaari karo...